तिथि मेरो पत्रु »7पत्रु प्रेमी बारे सत्य
एक पाल्तु जनावर owning साँच्चै जीवन परिवर्तन हुँदै छ. अनि ती पत्रु प्रेमीहरूले सबै बाहिर त्यहाँ लागि, हामी तपाईंलाई साँच्चै तल सात सत्य संग resonate गर्न सक्नुहुन्छ भनेर थाह.
सत्य #1: “पत्रु उच्च”
पत्रु मालिक साधारण थप उच्च आत्म-सम्मान परिणामस्वरूप विश्वस्त छौं. पाल्तु जनावर र unconditionally प्रेम, खुसीसाथ अभिवादन, र स्वीकृति को आवश्यकता पूरा, सिर्जना एक “उच्च pet”, एक पाल्तु जनावर मालिकको रूपमा जो, तपाईं भावना पिटे सकिँदैन भनेर थाह.
सत्य #2: जीवन थप सकारात्मक आउटलुक
आफ्नो पाल्तु जनावर र सोचिरहेका जब, तपाईंलाई मदत गर्न सक्दैन तर मुस्कान र तिनीहरूले आफ्नो जीवन मा आनन्द ल्याएको छ जसमा सबै तरिका विचार. हुँदा पनि पटक कठिन छन्, घडी-लामो cuddle र प्ले सत्र आफ्नो दिन रोशन. वास्तवमा जब आफ्नो पाल्तु जनावर सोचिरहेका, नकारात्मक को विचार दूर पर्ची र positivity आफ्नो शरीर भर radiates.
सत्य #3: एक्लो कुनै थप
पाल्तु जनावर र पनि सम्बन्धित को भावना हामीलाई प्रदान र हामीलाई अर्थपूर्ण अस्तित्व दिन. हामी देख्न र र्शतहीन महसुस यो सबै गर्दा पाल्तु जनावर स्वामित्व को आवश्यक जिम्मेवारी र बलिदान लायक छ, तिनीहरूले प्रदान nonjudgmental सान्त्वना.
सत्य #4: जीवन र सम्बन्ध दिशा खोल्न
यो “उच्च pet” हाम्रो पाल्तु जनावर र देखाउँछ कि हामीलाई कमजोर एकदम डरलाग्दो छैन रूपमा रहेको बनाउँछ. हामी कुनै कुरा के हुन्छ भन्ने थाहा लागि, त्यहाँ जीवित हामीमाथि भरोसा गर्न वाला कुरा हो. पाल्तु जनावर र माध्यम’ मायालु प्रकृति र स्नेह, साँचो निर्भरता पाल्तु जनावर र देखाउन हामीलाई शीर्षकमाथिको साँच्चै लायक जोखिम हरेक समय छ कि आशा प्रदान गर्दछ.
सत्य #5: सोल जीवनसाथी विश्वासले
आफ्नो नजरमा श्रद्धा को भनेर नजर गर्न अनियमित चुंबन मार्फत काखमा-बसिरहेका, को र्शतहीन प्रेम पाल्तु जनावर र प्रदान अर्थ नयाँ शब्द प्राण जोडीलाई दिनुहुन्छ. पाल्तु जनावर प्रेमीहरूले र उत्साही लागि, हाम्रो पाल्तु जनावर र हाम्रो प्राण जीवनसाथी को एक हो. तिनीहरूलाई द्वारा “बस थाह” हामी केही अतिरिक्त ध्यान पुष्टि गर्छ आवश्यक जब आफ्नो आत्मामा प्रत्येक अन्य कुरा भन्ने. यो हाम्रो पाल्तु जनावर र प्राण जीवनसाथी यो विचार गर्न हामीलाई थप खुला र सम्बन्धित बनाउन यो धारणा छ.
सत्य #6: भावनाहरू सम्पर्कमा
भावना द्वारा, कि hysterical रो वा स्थिर मुड swings होइन. पाल्तु जनावर र नरम सम्पर्कमा प्राप्त गर्न हामीलाई अनुमति दिएर हाम्रो जीवन एक गहिरो अर्थ दिन, थप घनिष्ठ भावना. हामी, पाल्तु जनावर मालिक रूपमा, सामान्यतया थप उत्साहित र खुल्लमखुल्ला मात्र होइन साथै हाम्रो पाल्तु जनावर र तर अरूलाई हाम्रो विचार र भावना व्यक्त गर्न सक्षम छन्.
सत्य #7: पाल्तु जनावर र पहिलो
हाम्रो पाल्तु जनावर र हाम्रो छोराछोरी छन्. निरन्तर पाल्तु जनावर तस्वीर हजारौं बचत गर्न तिनीहरूलाई कुरा तिनीहरूलाई बच्चाहरु रूपमा उपचार गर्न, हामी र हाम्रो पाल्तु जनावर र सम्बन्ध बच्चा एउटा अभिभावक को भनेर धेरै समान छ.